Madaxweynaha Soomaaliya oo shacabka Soomaliyeed udiray fariin laxiriirta Corono-Virus. – Banaadir Times
By banaadir 28th March 2020 102
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay mideeyaan cududdooda iyo awooddooda, una istaagaan sidii ay dalkooda uga samata-bixin lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa Coronavirus uu dhaxal siiyey dalal badan oo caalamka ah.
Maxaa Sababay duulimaadyada gudaha dalka in lajoojiyo?
Maxay ka wada hadleen Sheekh Shariif & Guddoomiyaha Aqalka Sare?
Puntland oo noqotay goobta koowaad oo Soomaaliya la keeni doono talaalka Covid 19
By banaadir 14th March 2021